ဂျပန်ကုမ္ပဏီသည်ကမ္ဘာမှအာကာသသို့သွားနိုင်သောဓာတ်လှေခါးတစ်ခုတည်ဆောက်တော့မည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Science & Religion » ဂျပန်ကုမ္ပဏီသည်ကမ္ဘာမှအာကာသသို့သွားနိုင်သောဓာတ်လှေခါးတစ်ခုတည်ဆောက်တော့မည်
Posted by Mr WorldWide on Feb 14, 2013 in Science & Religion, Sciences & Resources |7comments
ဂျပန်ကုမဏီတစ်ခုသည် အာကာသထဲသို့ ဓာတ်လှေခါးဖြင့်တက်ခြင်း စိတ်ကူးအစီအစဉ်တွင် ငွေများထည့်ဝင်ရင်းနှီးရန်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါသည်။ အာကာသထဲသို့ တိုက်ရိုက်တက်သွားနိုင်ရေးစွမ်းဆောင်မှုသည် နာဆာနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများမှ သိပံပညာရှင်များအတွက် သုတေသနလမ်းကြောင်းသစ် တစ်ရပ် ဖွင့်ပေးလိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ယခုအခါအဆိုပါကုမဏီသည် ၂၀၅၀ ခုနှစ်တွင် ပြီးစီးမည့်အာကာသထဲသို့ တက်သွားနိုင်သော ဓာတ်လှေခါးတည်ဆောက်ရန် ပြင်ဆင်နေပါသည်။ ဓာတ်လှေခါး၏ အလျား ၂၂၀၀၀ မိုင်ရှိမှသာ ကမ္ဘာမြေနှင့်အာကာသစခန်းအား ချိတ်ဆက်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ မြေပြင်စခန်းနှင့် အာကာသစခန်းနှစ်ခုအား ကေဘယ်လ်ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အာကာသစခန်းသည် ကေဘယ်လ်အား ထိန်းချုပ်သည့် ချုပ်တိုင်ဖြစ်ပေလိမ့်မည်။ ၄င်းဓာတ်လှေခါးအနေဖြင့် လူ ၃၀ အား သယ်ဆောင်ပြီး ၈ ရက်နှင့် အာကာသစခန်းသို့ရောက်ရှိအောင် သွားနိုင်လိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ခရီးစဉ်အတွင်း ခရီးသည်များသည် နေ့၇က်တိုင်းတွင် ကိုယ်အလေးချိန်လျော့နည်းလာပြီး ကောင်းကင်တွင် ပျံသန်းနေသကဲ့သို့ခံစားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ယင်းဓာတ်လှေခါးသည် ၁ နာရီလျှင် အမြင့်ဆုံး ၁၂၅ မိုင်နှုန်းဖြင့် သွားနိုင်ပါမည်။ တာရရှိ၏ အဆိုအရ ဓာတ်လှေခါးကေဘယ်အား ကာဘွန်နာနိုပိုက် အသုံးပြု၍ တည်ဆောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်းစီမံကိန်းသည် စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သော်လည်း နှစ်ပေါင်း ၃၀၊ သို့မဟုတ် ၃၅ နှစ်အတွင်း ဒေါ်လာ ထရီလီယံပေါင်းများစွာ အသုံးပြုမှသာ ပြီးစီးမည်ဖြစ်ပါသည်။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု အနည်းငယ်ရှိလိမ့်မည်ဖြစ်ပြီး မည်ကဲ့သို့ အကောင်းဆုံးပုံစံဖြင့် အကောင်းဆုံးပုံစံဖြင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ပေါ်လာမည်ကို မျှော်လင့်စောင့်စားရပေလိမ့်မည်။ အဆိုပါ စီမံကိန်းသည် အံသြစရာအကောင်းဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့ ဘ၀သက်တမ်းအတွင်း စီးနိုင်ရန်မျှောင်လင့်ရပါသည်။
Imagine stepping into an elevator, pressing the “Space” button and sometime later, floating in space!!. How cool will that be? This might sound madness now but glad fully, one Japanese company is ready to put money on this idea. This capability of providingadirect lift to space will open new avenues of research for scientists, NASA projects or even entertainment for public!
နောက် အနှစ် ၄၀ လောက် ကျရင်တော့ နာဆာ ကို လေ့လာရေး ခရီး ထွက်နိုင်ကောင်းပါရဲ့..
နတ်ပြည်က နတ်သားတွေ အလုပ်ရှုပ်တော့မှာပဲ
သူတို့တွေ တစ်ခါတက်လာတိုင်း နတ်ပြည်ကို တစ်ခါဖွက်နေရတာ
အဲဒီ ဓာတ်လှေကားနဲ့သာဆိုလို့ကတော့ ဖွက်လို့ နိုင်မှာမဟုတ်တော့ဘူး
ကမ္ဘာကလည်နေတာမို့.. အာကသစခန်းနဲ့ချိပ်ထားတဲ့.. ကြိုးဘယ်လိုကြီင်္းဖြစ်သွားမလည်း.. တွေးလို့မရဘူး..
အာကာသထဲ က လျပ်စစ် ကို ထုတ်ယူ ဖို့ ပေါင်လုံးလောက် ရှိတဲ့ ကေဘယ် နဲ့ အာကာသနဲ့ မြေပြင် ချိတ်ဆက်ဖို့ ကြိုးစားတာတော့ မိုင်တစ်သောင်း မပြည့် ခင် Ampere မခံနိုင်ဘဲ ပြတ်ထွက်သွားတယ်။ကြာပါပြီ အမေရိကန် တွေရဲ့ စမ်းသပ်မှု လို့ ထင်တယ်။ မသေချာဘူး။
အခု ဓါလှေခါး အစီအစဉ် ကို စဉ်းစားကြည့် ရင် ကမ္ဘာကြီး ဟန်ချက် ပျက်နိုင်တယ်။ ကမ္ဘာ့ အချင်း က ၃၉၅၉ မိုင်ဘဲ ရှိတယ်။ အခု ဓါတ်လှေခါး အရှည်က ၂၂၀၀၀ မိုင် ဆိုတော့ ၆ ဆကျော် ကွာတယ်။ ကမ္ဘာရဲ့ နေကိုပတ်နေတာ ရော နေ့ နဲ့ ည ဖြစ်ပေါ် ဖို့ လည်ပတ်မှု ဟန်ချက်တွေ လုံးဝ ပျက်မယ်လို့ သုံးသပ်ချင်တယ်။
အဲဒီအတွေးကို .. အင်မတန်ချီးကျူးလိုက်ပါတယ်..
ကမ္ဘာရဲ့ နေကိုပတ်နေတာ ရော နေ့ နဲ့ ည ဖြစ်ပေါ် ဖို့ လည်ပတ်မှု ဟန်ချက်တွေ လုံးဝ ပျက်မှာပါ..
လောလောဆယ်… မနက်ဖြန်မှာ ကမ္ဘာနားကဖြတ်မယ့်.. ဥက္ကာပျံက.. ၁၅မိနစ်လွဲရင်..ကမ္ဘာကိုဝင်တိုက်မယ်လို့ဆိုပါတယ်..
Could Archimedes have lifted the Earth? « Daily Life Physics
May 8, 2012 – Give meaplace to stand, and I shall move the Earth withalever” – once said the famous Greek physicist Archimedes, who discovered laws of …
Asteroid to Miss Earth by 15 Minutes on Feb. 15 – One News Page [US]
http://www.onenewspage.us › US
5 hours ago – Asteroid to Miss Earth by 15 Minutes on Feb. 15 ♢ Patch Novato, CA — On Friday, asteroid 2012.. ♢ US on One News Page[US] on Thursday, …
၁၅ မိနစ်ဆိုတာ ဒီဂရီ မိနစ်ကို ပြောတာနေမှာပါ၊ ဒါပေမယ့် အချိန်နဲ့က လည်းဆက်နေမှာပါပဲ၊ အလင်းအလျင်နဲ့ သွားနိုင်ရင် အချိန်က ရပ်နေမယ်ဆိုလားပဲ သီအိုရီအရပေါ့ အလင်းအလျင် နဲ့ ဘယ်သူမှမသွားနိုင်တော့ သက်သေမပြနိုင်သေးဘူးပေါ့လေ။ ဒီဓါတ်လှေခါးတော့ မလုပ်ဖြစ်လောက်ဘူးထင်ပါ့ဗျာ